FICUS "RETUZ": DARYEELKA GURIGA, SAWIRO, SHARAXAAD GUUD EE GEEDKA - SOOSAARKA DALAGGA
Qaybta Aasiya ee gurigaaga - ficus "Retuz"
Tobanaan sano ka hor, ficusku wuxuu ahaa mid aad u caan ah, waxaa laga helaa macno ahaan meel kasta oo ka mid ah guriyeynta Soofiyeedka.
Waqti ka dib, wuu lumiyay sumcadiisa, laakiin hadda wuxuu mar kale helayaa calaamadaha dadka jecel dhirta gudaha.
Mid ka mid ah noocyada aan caadiga ahayn waa Ficus Retuz. (Ficus retusa) - Warshad leh cufnaanta cufan ee cufan, laamood cufan leh oo leh cufan yar, caleemo cagaaran oo cagaaran.
Nooca ficuska waxaa badanaa lagu koriyaa bonsai, taas oo ka soocaysa noocyo kale oo ficus ah.
Dhulka hooyo ee dhirta waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay tropics of Asia, halkaas oo geed this qarxan ee dabiiciga ah gaaro ilaa labaatan mitir dhererka.
Miyaad ku jirtaa geedo bonsai ah? Wixii beerashada ay yihiin noocyada noocyada kala duwan ee ficus ah: Bengal, Benedict, Microcarp, Eden, Karik, Lirat, Leaf Large, Balzamin, Ginseng iyo Blunted.
Ficus ayaa si qurux badan u qabta daryeelka aan qabin, sidaa daraadeed, u kora iyada oo awoodda xitaa a florist january - hiwaayadda.
Si kastaba ha ahaatee, si ficus ah uu u koro weyn, waxaad u baahan tahay inaad dulqaadasho, sababtoo ah Noocyadaasi waxay si tartiib ah u koraan.
Dhanka kale, warshad qaangaar ah ayaa noqon doona quruxda iyo qurxinta asalka ah ee gudaha gudaha, sanado badan oo farxad leh milkiilaha leh caleemo cagaaran oo suurtogal ah.
Waa muhiim! Casiirka ficusku waa sun, waxaana laga yaabaa, haddii ay taabato maqaarka, waxay keentaa guduudasho ama cuncun.
Marka daryeesho warshadu waa inay ahaato mid taxaddar leh oo fulisa dhammaan nadaafadda adoo isticmaalaya gacmo gashi.
Daryeelka ka dib iibsashada
Kadib markaad guriga u soo qaadatid gurigaaga, waa inaad sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah u hesho inaad hesho meel ku habboon "meel deggan", halkaas oo uu ku noolaan doono.
Ha dhigin geedka meesha hawadu aad u qallalan tahay, meel u dhow beteriyada iyo qorraxda qiiqa. Sidoo kale ma'aha lagama maarmaan in la dhigo meesha ay jiraan qoraallo.
Laga bilaabo maalinta ugu horreysa, ficus waa in la waraabiyaa mar ama laba jeer maalin kasta.
Maalinta ku xigta, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in ciidda ay ku filan tahay qoyaan: haddii dhulku qallalan yahay qoto dheer oo ah toban sintimitir - waa in dhirta la waraabiyaa.
Ha ka werwerin haddii maalmaha ugu horeeya ay ka baxaan bilaabaan inay ka soo baxaan ficus - sidan oo kale, wuxuu ka soo horjeedaa "guriga" cusub, oo aad u dhakhso badan, daryeel taxadar leh, ayuu u isticmaali doonaa.
Maalmaha xagaaga, Ficus waxay u baahan tahay waraabinta joogtada ah - ciidda waa in si joogto ah loogu hayaa xaalad dhexdhexaad ah oo qoyan.
Xilliga jiilaalka, dhirta waa in la waraabiyaa si aad u yar.
Guud ahaan, geedka ayaa si caadi ah uga jawaabaya maqnaan la'aanta wakhtiga gaaban, laakiin inta lagu jiro koritaanka firfircooni waa wax aan la aqbali karin in la qalajiyo dhulka, iyo sidoo kale biyo-daadinta dheriga.
Taajka waa in si joogto ah loo buufiyaa, isagoo hubinaya in yar yar ee suurtogalka ah ku dhaco jirridda biyaha.
Waa muhiim! Maareynta dhirta, waxa ugu wanaagsan in la isticmaalo biyo la kariyey si looga fogaado muuqaalka ubaxyada cad ee caleemaha. Biyaha ma aha inay qaboobaan.
Marka hore, dhirta yaryar waxay si qumman u koraan, laakiin sannadka labaad waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo dhismaha taajka iyo jarjar dhererka dhererka la rabo.
Haddii caleemaha si dhif ah loo abuuro, waa in xarig dhexe lagu xiraa taageero.
Markaas waxaa lagama maarmaan ah in si joogta ah loo gooyo geedi socodka dhalinyarada hal ama laba caleen caleen.
Xilliga jiilaalka, marka dhirta ay tahay nasasho, waa inaad gooyaa laamaha, oo ah geedo.
Inta badan guga iyo qoraxda, waxaa habboon in la jaro caleemaha yaryar iyo caleemaha si ay si habboon u hagaajiyaan kobaca caleen.
Qaybta gudaha ee taajka ayaa sidoo kale ku xiran khafiifinta wareega ah.
Laamihii sare ayaa la soo gaabiyey - kaliya seddex ama afar caleemo ayaa ka haray, taas oo gacan ka geysanaysa horumarinta laanta hoose.
Haddii caleemaha ficus bilaabeen inay huruud isu beddelaan, waa in laga saaro. Foosto, oo si weyn u saameeya qoyaanka, waxay saldhig u noqon kartaa suufka cagaaran. Wakhti ahaan waxay u baahan tahay in la nadiifiyo burush aan cidhiidhi ahayn.
Ficus Retuz, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho ciidda diyaarka u ah fayaqabka ama calaacalaha.
Waxa kale oo aad si madaxbannaan u diyaarin kartaa ciidda adoo isku dardaraya ciido siman, humus iyo dhoobo dhoobo.
Bacriminta dhirta waxaa lagu sameeyaa bacriminta gaarka ah ee bonsai ama bacrimin caam ah oo ku saabsan laba illaa afar asbuuc jiilaalka iyo toddobaad kasta laga bilaabo Maarso ilaa Sebtembar.
Saddex sano kadib, celinta ugu horeysa ee geedka waxaa badanaa la sameeyaa Dhirta yaryar waxaa badanaa la googooyaa hal mar sanadkii, horaantii bishii Maarso, gabi ahaanba badalida ciidda.
Noocyo badan oo baaluq ah ayaa la googooyaa hal mar labadii sanaba hal mar, halka si taxadar leh looga saaro xididada yaryar, taas oo ah kubbadda la gooyey dhammaadka rizoodka. Ka hor inta aan la beeriin cusub, lakabka dheecaanka waa in lagu dhejiyaa dheriga.
Ficus ficus waxaa la fuliyaa guga. Habkani waa mid sahlan:
waa inaad dooran kartaa caleemo qallafsan oo jarjarid qaybta sare;
dhig jarjarka la soo doortay ee weelka biyaha;
ka dib muuqaalka xididada (inta badan kadib dhowr todobaad), geedi socodka waxaa lagu beeray dhulka.
Ficus Retuz ayaa raaxo leh at 15-25º C. Waxay ku jiri kartaa guriga muddo dheer, iyo xagaaga, marka heerkulka dibeddu ka baxdo shan iyo toban darajo, dhirta si ammaan ah ayaa loo fulin karaa hawada furan.
Talo: Ficus wuxuu jecel yahay iftiin, laakiin xagaaga, gaar ahaan inta lagu jiro saacadaha qorraxda qorraxda, waa in laga daboolaa raajo toos ah.
Fikradda sawirka "Retuz":
Sababtoo ah qaabkeeda aan caadi ahayn, Ficus Retuz waxay noqon doontaa mid sharraxaad ah oo muujinaysa wax kasta oo gudaha ka mid ah, ma aha oo kaliya guri ama guri, laakiin sidoo kale xafiiska. Intaa waxaa dheer, waxaa si fiican u qoyan hawada, qolka ku daraya qolka oksijiin iyo xitaa hanti bactericidal ah.
Haddii aad daryeesho oo hubiso in cabitaanka geedkaan uusan ka helin maqaarka (sababtoo ah suurtogalnimada in uu keeno xasaasiyadaha xasaasiyadda), dhirtaas wax dhaawac ah ma laha.
Laakiin amniga, waxaa fiican in la dhigo dherer ficus ah meel aan la heli karin oo loogu talagalay carruurta yaryar.
Daryeelidda ficus ma aha mid adag, laakiin si ay warshadu u noqoto mid caafimaad qaba oo aad ku raaxaysato caleemaha cagaaran ee succulent, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso dhowr dhibcood:
waraabin badan ayaa keeneysa in ay ka baxaan xididada iyo dhacdooyinka lakabyada dusky on caleemaha;
waraabiyo tiro yar ayaa daciifin karta dhirta waxayna keenaysaa caleemaha inay hoos u dhacdo;
caleemaha ka tagaya ayaa sidoo kale dhici karta sababo la xidhiidha naqshadeynta iyo heerkul aad u kacsan;
qoyaan aan ku filnayn waxay keeni kartaa cayayaanka dhirta iyo caarada caarada caarada.
Cayayaanka ugu weyn ee ficus Retuz waa duullaan cad iyo noocyo kala duwan oo ah noolaha oo nuugaya juuska.
Si looga hortago dhacdooyinkooda iyo tarankooda, waxaa lagama maarmaan ah in si joogta ah loola socdo caleemaha dhinaca dambe iyo in la baabi'iyo cayayaanka aan lahayn waqti ay ku kobcaan.
Laakiin cudurka ugu halista ah ee dhirta waa anthracnose, taas oo khalad ah lagu wareeri karaa gubashada muuqaalka caleemaha ka soo baxa qorraxda tooska ah ee qorraxda.
Sannado ka dib, ficus ayaa dib ugu soo laabtay guryahayaga. Sababtoo ah isaga oo aan qabyo ahayn iyo fudaydka daryeelka, wuxuu noqday inuu jecel yahay inuu bannaanka u badan.
Fikradaha ugu caansan ayaa ah ficuusyada ugu quruxda badan, oo ay ku jiraan Moclame oo caan ah, cirifka, Boqorka Amstel King, xamaasadeynta kalkaalinta, hindhisada u eg, Varietis xariif ah, soo jiidasho leh De Gantel, Hardy Ali, iyo sharaf leh Pumila White Sunny, iyo sidoo kale siinta raaxada iyo ladnaanta. Saddex xagal iyo yaryar.
Ficus RetuzWaxaa laga yaabaa in mid ka mid ah noocyada aan caadiga ahayn ee dhirta, awood u leh inuu "soo nooleeyo" qol kasta oo u keeno jawi ah iftiin iyo fudud.